गठबन्धनको गन्तव्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २५, २०७४ अखण्ड भण्डारी
काठमाडौँ — राजनीतिक स्थिरताको विश्वव्यापी मापनमा नेपाल १६२ औं स्थानमा पर्छ । नेपालभन्दा अस्थिर ३२ देश छन्, जसमा थाइल्यान्ड हुँदै इराक, सोमालिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन, सिरियासम्म पर्छन् ।
लोकतान्त्रिक वातावरण उपयोग गरिरहेको नेपाल अत्यन्त तानाशाही र अशान्त मुलुककै हैसियतमा रहिरहनु दु:खद उपलब्धि हो। यसको दोषी हाम्रो राजनीतिक संक्रमण, लोकतान्त्रिक अभ्यास, नेताहरूको पदलोलुपता र पार्टी–पसल प्रमुख हुन्।
बहुदलीय व्यवस्था भनेको च्याउसरी दल खोल्नु होइन। दलको पसल राखेर सत्ताको च्याँखे थापेका भरमा लोकतन्त्र मजबुत हुँदैन। ती सबै किराना पसल बन्द गरेर ठूलठूला सुपरमार्केट नबनाएसम्म नेपाली राजनीतिको कालोबजारी रोकिने हालत छैन। नेता र दलको अकासिँदो मूल्यवृद्धि नेपथ्यको राजनीतिक कालोबजारी नै हो। राजनीतिलाई विकृत बनाउने पनि यही हो। त्यसैका लागि गठबन्धन, एकीकरण, विलयदेखि प्रलयसम्म हुनु आवश्यक छ। पछिल्ला घटनाक्रमसँगै ठूलादेखि सानासम्म दलमा त्यसको भुइँचालो गइसकेको छ। ठूला दललाई आफूलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने चिन्ता छ भने सानालाई कता मिल्यो भने बढ्ता भाग पाइन्छ भन्ने चासो। त्यसकै मौसम सप्रिएको छ अहिले। त्यसकै ब्याड राखेर खेती सम्याउन दलहरू व्यस्त छन्, जुन नेपालका लागि सुखद संयोग हो।
अस्थिरताको बादल मडारिइरहे पनि नेपाली राजनीतिक आकाशमा चाँदीको घेरासमेत नदेखिएको होइन। हामी संघीयता कार्यान्वयनको संघारमा छौं। शक्ति र सत्ताको विकेन्द्रीकरण हाम्रा नेताले चाहेर/नचाहेर फुत्काइसकेका छन्। स्थानीय तह सबैभन्दा शक्तिशाली बनेको छ। त्यति धेरै अधिकार प्रत्यायोजन नगरिए पनि प्रदेशको संरचना निर्माण र कानुनी पूर्वाधारहरू तयार भइरहेका छन्। समानुपातिक समावेशिता, पिछडिएकालाई हक–अधिकारका संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थामा हामीले फड्को मारिरहेका छौं। नेपालले राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म महिला पाइसकेको छ। दलहरूको आन्तरिक असमावेशिता एवं पिछडिएका वर्गभित्रैका अगाडिकाले अवसर छोप्ने परिपाटी रोक्ने हो भने कागजी रूपमा नेपालीले पाएको अधिकार अनुकरणीय छ। हाम्रो संविधान संसारमै उत्कृष्टमध्ये पर्छ। आर्थिक रूपमा टाट भएरै पनि राजनीतिक प्रगतिमा संसारले हेर्ने ठाउँमा पुगेका छौं।
तर पनि मुख्य समस्या– राजनीतिक अस्थिरता हट्न सकेको छैन। दलहरू सत्ताकेन्द्रित भएकै छन्। वर्तमान गठबन्धनहरूलाई पनि सत्ता प्राप्तिकै गन्तव्यसम्म हेर्ने धेरै छन्। भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देखेजस्तै हो यो। दलहरू सत्ता एवं पदलोलुप देखिँदै आएकाले यसरी अथ्र्याइएको हो। तर, सकारात्मक सोच राख्ने हो भने, प्रश्न गर्न सकिन्छ– गठबन्धन सत्ताका लागि मात्र हुन्छ र? मेलमिलापै नगर्ने हो भने हामी कसरी अघि जान सक्छौं? संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्को समानुपातिक प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउन वर्षौं गाह्रो छ। जबसम्म यस्तो परिणाम आइरहन्छ, पहिलो–दोस्रोभन्दा तेस्रो दलको पल्ला भारी हुन्छ। उसलेकहिले यताको डुंगा चढ्छ, प्वाल पार्छ, उताको चढ्छ, त्योपनि प्वाल पार्छ, अर्कामा चढ्छ। संसद्भित्रको यो ‘मुसो’ प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्ने उपाय नै दलहरूको अग्रिम गठबन्धन र त्यसको टिकाउपन हो। चुनाव लड्नुअघि नै मिल्ने र बहुमत ल्याउने गठबन्धनले ५ वर्ष ढुक्कले शासन चलाउने हो भने मात्र स्थिरतातर्फ देशले पाइला चाल्न पाउनेछ। नपुगेको कुरा अनि पुग्नेछ।
भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा बनेको ‘नेसनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स (एनडीए) ले पटक–पटक पूर्ण कार्यकाल शासन चलाएको छ। यसले पछिल्लो सन् २०१४ को चुनावमा लोकसभाका ५४३ सिटमध्ये ३३६ वटामा जितेको छ। नेतृत्वकर्ता भाजपाको २८२ सिट छ। गठबन्धनका कारण सत्तारुढ दलको ६१.८७ प्रतिशत सांसद छन्। यो राम्रो बहुमत हो। यसका कारण उसलाई जुनसुकै निर्णय गरेर अघि बढ्न सजिलो छ। लोकसभामा साधारण बहुमत अर्थात् ५१.९३ प्रतिशत भाजपा एक्लैको छ। जब कि राज्यसभामा उसको ५६ र प्रतिपक्षी कंग्रेस एक्लैको एक सिट बढी ५७ छ। फलत: सत्तारुढ गठबन्धनलाई निरन्तरताको जरुरी छ। त्यहाँ छाडेर अन्यत्र टाँसिने ‘मुसा’ पनि छैनन्। किनकि, लोकसभामा कंग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन ‘युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलाइन्स (यूपीए) का लोकसभामा जम्माजम्मी ६३ सांसद छन्। उनीहरूसँग ‘मुसा’ पस्न सक्ने डुंगै छैन। नेपालमा पनि यस्तै हुनु जरुरी छ। जुन गठबन्धनले भएपनि सुरक्षित बहुमत ल्याएर ५ वर्ष शासन चलाएको हेर्न मतदाता आतुर छन्।
किनकि, नेपालमा सरदर ९ महिनामा सरकार बदलिन्छन्। सरकार फेरिएपिच्छे कर्मचारीतन्त्रमा फेरबदल हुन्छ। राजनीतिक नियुक्तिहरू भत्किन्छन्। उपल्ला पदमा पुर्‍याइएका ‘पाहुना प्रमुख’ हरूले मन दिएर काम गर्दैनन्, बरु दामतिर मन दिन्छन्। पाहुना नै ठानेर मातहतकाले तिनलाई टेर्दैनन्। एकपछि अर्को राख्दा अनावश्यक खर्च हुन्छ। सरकार फेरिइरहँदा व्यक्ति मात्र फेरिँदैनन्, तिनका नाममा वाहियात खर्च बढ्छ। त्यो सबै जनताको करबाट जाने हो। व्यक्ति जवाफदेही नहुँदा यो अवस्था आउँछ। उदाहरणका लागि भारतस्थित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले सांसदमा उठ्न राजीनामा दिए।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द पोखरेलले त्यसै गरे। उनीहरूलाई यतिबेला चुनाव हुने थाहा थियो। उठ्नु नै थियो भने महिरत्ते गरेर उसबेला किन पद लिनु थियो? अरू पनि आकांक्षी थिए। तिनले मौका पाउँथे। एउटा गतिमा काम अघि बढाउँथे। कसले के गरेको छ भन्ने पत्तो पाउनै नवआगन्तुकलाई महिनौं लाग्छ, उसलाई नयाँ केही गर्ने तुजुक जाग्छ। पुराना निर्णय भत्काउँछ। अभ्यासै–अभ्यासमा राज्यकोष स्वाहा हुन्छ। अस्थिरताको जड यो पनि हो। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति दिंदा अर्को अवसरका लागि बीचैमा छाडेको खण्डमा खाएको/पाएको सबै फिर्ता गर्नुपर्ने कडा सर्त नराखेसम्म नेपालजस्तो गरिब देश अघि जानै सक्दैन।
र, त्यो अवस्था आउन नदिने अर्को उपाय राजनीतिक एवं सत्ताको स्थिरता हो। त्यसका लागि गठबन्धन आवश्यक छ। जित्न मात्र होइन, राजनीतिकलाई दिगो बनाउन पनि। चाहे बनिसकेको बाम–गठबन्धन होस्, वा बन्ने तरखरको लोकतान्त्रिक, कुनै एउटा पल्ला भारी हुनैपर्छ। चाकाचुली खेलेजसरी देश धेरै वर्ष हल्लिइसक्यो। अब भने स्थिर बन्न सक्नुपर्छ। सके त दलहरू एकीकरण र बिलय भएर दुइटा बन्नु सर्वथा राम्रो हो। अमेरिकामा दुई दलले पुगेको छ, हामीकहाँ बग्रेल्ती किन चाहियो? त्यसैले दुवै गठबन्धन त्यहाँसम्म पुगुन्, कम्तीमा एउटाले एकमना सरकार बनाओस्, पाँच वर्ष शासन गरोस्। र, पार्टी–पसलहरू पनि बन्द गराओस्।
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७४ ०७:३५
नेपाल छनोटबाटै बाहिरियो
आश्विन २५, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं — नयाँ स्वरुपमा उत्रिएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली ताजिकिस्तानसँग फेरि पराजित भएको छ । एएफसी एसियन कपको समूह ‘एफ’ अन्तर्गत चौथो खेलमा ३–० ले पराजित भएसँगै नेपालको यात्रा छनोट चरणमा सीमित भएको छ । नयाँ संरचनामा उत्रिएको नेपाली टोली सुरुदेखि दबाबमा रह्यो ।
खेलको आठौं मिनेटमा गोलरक्षक किरण चेम्जोङले मानुसेर जालिलोभको प्रहारलाई उत्कृष्ट बचाउ गरेलगत्तै ताजिकिस्तानका उमारबोएभ पर्भीजोनले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट गरेको कडा प्रहार पोस्टमा लागेर फर्किएको थियो ।
लगातार आक्रमण बुनेको ताजिकिस्तानले खेलको २० औं मिनेटमा पेनाल्टी पायो । फाथुलोएभ फाथुल्लोको क्रस अनन्त तामाङको हातमा लागेपछि रेफ्रीले पेनाल्टी दिएका थिए । कप्तान दाभ्रोनोभ नुरिद्दिनले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाए ।
दोस्रो हाफको ६० औं मिनेटमा अनन्त तामाङले मानुसेर जालिलोभलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि ताजिकिस्तानले दोस्रो पेनाल्टी पायो । पर्भिजोनले पेनाल्टीबाट गोल गर्दै ताजिकिस्तानको अग्रता दोब्बर पारे । खेलको अन्तिम समयमा ताजिकिस्तानले पुन: पेनाल्टी पायो । आदित्य चौधरीले जहिलोभ इस्कन्दरलाई लडाएपछि रेफ्रीले पेनाल्टी दिएका थिए । उक्त पेनाल्टीमा मनुसेर जालिलोभले गोल गर्दै ताजिकिस्तानको जित सुनिश्चित गरे ।
नेपाली टोलीले खेलमा उल्लेख्य आक्रमण गर्न सकेन । पहिलो पटक सुरुआती रोजाइमा परेका जर्ज प्रिन्स कार्की जम्न नसक्दा प्रशिक्षक ग्यातोकु कोजीले उनलाई दोस्रो हाफको सुरुमै परिवर्तन गरे । नयाँ संरचना भएकाले डिफेन्सले पनि बेला–बेलामा गल्ती गरिरहेको थियो । गोलरक्षक किरणले राम्रो प्रदर्शन गरे पनि उनले पेनाल्टीमा कुनै मौका पाएनन् । यस पराजयसँगै बाहिरिए पनि नेपालले छनोटमा अझै दुई खेल खेल्न बाँकी छ । अर्को महिना हुने पाँचौं खेलमा नेपालले फिलिपिन्सलाई निम्त्याउने छ भने अन्तिम खेल दोहामा यमनसँग खेल्नेछ ।
नेपाली टिम : किरण चेम्जोङ, अनन्त तामाङ, आदित्य चौधरी, देवेन्द्र तामाङ, भरत खवास (कप्तान), विशाल राई, रोहित चन्द, सुजल श्रेष्ठ, अन्जन विष्ट (६९’ विक्रम लामा), विमल घर्तीमगर (७८’ कमल श्रेष्ठ), जर्जप्रिन्स कार्की (५१’ नवयुग श्रेष्ठ) ।
प्रा. महेन्द्र लावती
डा. अरुणा उप्रेती, मधु राई